Use the code to save MMK10,000 on this special period ~ The ICT.com.mm Blog
Use the code to save MMK10,000 on this special period
It is Payday!!! Use the code to save MMK10,000 on this special period.
Come and shop here, you have got to be hurry up before it ends on 2nd Jun 2022.
​နောက်​ဆုံး​တော့ လစာထုတ်​ရပြီး​​!!! ပိုပြီးပျော်ရွှင်သွားရအောင် ICT.com.mm တွင် ဈေးဝယ်ရန်အတွက် ဤကုဒ်ကိုသုံး၍ MMK 10,000 သက်သာစေမည့် အစီအစဥ်ပေ့ါ။ ရွေးချယ်ရန် နည်းပညာသုံးပစ္စည်းများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန် ထောင်ပေါင်းများစွာကိုကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ဖိုးနှင့် အထက် ဝယ်ယူအားပေးရုံဖြင့် ရရှိနိုင်မယ့် အစီအစဥ်လေးကို 27. 5.2022 မှ 2.6.2022 ရက်နေ့အထိဆိုတေ့ မြန်မြန်လေးမှာလိုက်နော်။
To shop https://www.ict.com.mm/
Openachat with us: https://t.me/ICTos_bot
#ShopICT #Myanmar #1OnlineTechRetailer #PayDaySpecialICT #CouponICT
Newer ငွေကျပ် ၁၄၀,၀၀၀ သက်သာမယ့် Midea Dryer အဝတ်အခြောက်ခံစက်
Older အိမ်အလုပ်တွေများလွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ချစ်တို့အတွက်